Uwe ejiji ụmụ nwanyị maka ụmụ agbọghọ - ogologo oge, na-acha ọcha, uzo, na rhinestones, nkedo, bipụta, na-emeghe ubu, na-egbutu n'akụkụ, dị ka nke a na-eme, ụdị agha
Ụdị T-shirts - gịnị ka ha bụ na otu esi emepụta ụta nke ọma?
Mgbe ị na-ahọrọ uwe, ndị inyom nọ n'afọ ndụ niile na-agbalị ịgbaso usoro ejiji. Ihe ndị na-agba ọsọ na uwe ndị inyom na-eji mma uwe T-shirts, nke a na-anọchite anya ya n'ọtụtụ dị iche iche.
Ụdị t-shirts maka ụmụ nwanyị
N'ọtụtụ nchịkọta nke ndị ọkà ozuzu a ma ama, e nwere T-shirts dị mma maka ụmụ agbọghọ. Ha na-anọchite anya ọdịiche dịgasị iche iche, otu n'ime ha bụ:
ihe ngosi di mkpirikpi nke di mkpirikpi nke oma, ihe ndi ozo dika udipuru nwere ike ime dika olu di nma. Nke a bụ ụzọ ntorobịa, ebe afọ na-adaghị afọ, ya mere a na-atụ aro na a ga-ahọrọ ụmụ nwanyị dị mkpa na ya;
na-emekarị bụ T-uwe elu nwere ubu dị ala. Ọ hụrụ ọtụtụ ụmụ agbọghọ n'anya, n'ihi na ọ na-enye ha obi ụtọ na anya njakịrị. Enwere ike ịdebe ma ọ bụ nhọrọ mmemme dị otú ahụ dịka ihe eji eme ihe, ngwa;
ọ dị mma na ngwongwo na-agbanwe agbanwe na n'elu, enwere ihe yiri uwe ejiji, nke na-agbakwụnye ọkaibe na ịdị mma. Enwere ike inwe ihe ndozi n'ụdị flounces, ụta, ịcha mma site na kọmpụ ma ọ bụ nkọwa ngwa;
ejiji T-shirts nwere ụdị mpempe akwụkwọ na usoro, nke etinyere na n'ihu. Ihe osise nwere ike ịgụnye otu nkata, isiokwu, ma ọ bụ naanị ọdịdị nkịtị;
ọ bụghị naanị na ịbịaru ya, kamakwa akwụkwọ ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa. Enwere ike iji ya na agba, chara acha, chara acha ma ọ bụ rhinestones;
achọrọ bụ akụkọ ndị na-eme ka ndị di na nwunye hụrụ ibe ha n'anya . Enwere ike ịzụta ihe dị otú ahụ n'onwe gị ma nyefee gị ọkara nke abụọ.
T-Shirts ogologo oge
Dezie ụfọdụ mmejọ nke ọnụ ọgụgụ ahụ nke nwere nhọrọ ziri ezi nke ogologo oge T-shirts. Ha na-ejikọta ya na akpa akwa na akwa uwe. O kwere omume ịkọwapụta ọdịiche dị iche iche nke ngwaahịa:
ogologo longsliv gbasiri ike, nke ejiri aka dị ogologo kwadoro ya;
ọ naghị adabere na ya dị ka ejiji, na obere ihu na elongated n'azụ. A na-enwekwa mgbanwe, ebe ọhụụ na-enweghị ihe ọ bụla bụ akụkụ nke akụkụ ahụ;
nwere ike ime ka ihe di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche nwere ike ime ka ha di nma.
ejiji T-shirts nwere ike ịkachasị ma ọ bụ nke a na-egbu egbu;
dị ka ihe eji eme ihe nwere ike iji owu, ákwà a na-ewu ewu na nke a kpara akpa, nke na-ewere ụdị ahụ ahụ, dị nro na aka na unpretentious na ịsa.
Ụdị t-shirts na rhinestones
Ndị na-emepụta ihe nkiri ndị na-ahọrọ ịmepụta ụda na-egbukepụ egbuke egbuke ga-enwe mmasị n'ụdị na-eji ihe ndozi na ọdịdị rhinestones. Ha nwere ike itinye aka na ngwaahịa nke ịkpụ, ma karịsịa na ha na-ele uwe elu na-acha ọcha ma ọ bụ ngwaahịa nke agba ojii. Okwesiri ighota ihe di iche iche ndi di iche iche nwere ike icho mma:
A pụrụ iji ụkpụrụ dị iche iche mee ihe, dịka ọmụmaatụ, kpakpando ma ọ bụ urukurubụba, ma ọ bụ onyinyo nkịtị;
ndị na-emepụta ihe malitere ịmalite ime ihe dị mma na ụrọ rhinestones, nke a na-etinye aka na ngwaahịa dị elu. Ụmụ agbọghọ ndị na-ahọrọ ka ejide onwe ha ga-enwe ike iburu ihe nwere obere ọnụ ọgụgụ ihe ndị dị otú ahụ;
a pụrụ iji t-shirts dị mma mee ihe maka mgbede ọhụụ ma ọ bụrụ na ha na-eji ákwà mara mma dịka silk, satin na chiffon.
T-uwe elu na-emeghe n'ubu
Maka oge dị iche iche n'usoro, e nwere ụdị ndị nwere oghe na-enye nwanyị na romance. N'ime ha, anyị nwere ike ịkọwa ọdịiche ndị a:
T-uwe elu na otu ubu, nke a na-enweghi ike ịbịaru ya ma ọ bụ ákwà nwere ike ịdata na mpaghara a;
nwere ike meghere ma n'ubu abụọ, a na-emepụta ngwaahịa ahụ site na iji otu usoro ihe eji eme ihe dịka otu ihe;
ụdị nwere ike ịmịcha ogologo oge, nwee ihe ị ga-eji na-egbu ya na ihe dị n'akụkụ ya, dịgasị iche iche;
nwere ike ịbụ nke ndo ọ bụla, ya mere ọ dị mkpa ịtụle ọnụnọ nke ihe e dere ma ọ bụ ihe oyiyi;
mee ka ihe dị mma ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe.
Uwe elu na-acha ọcha nke dị n'akụkụ
Nnukwu ihe dị mma na nke dị irè bụ ogologo T-uwe elu nke dị na n'akụkụ. E ji ihe ndị dị iche iche mara ya:
nwere nnukwu ihe dị mma, nke bụ nnukwu uru iji zoo obere adịghị mma nke ọnụ ọgụgụ ahụ;
mkpirisi nwere ike ịbụ obere ma ọ bụ akaebe, rute eriri n'úkwù na ọbụna bụrụ nke dị elu;
ezigbo ihe ngosi nke igwe anya, ebe enweghi ihe di iche iche nke na-acho onwu, a ga-etinye aka n'ikwu ya n'ogologo oge;
Enwekwara mpempe akwụkwọ na-ezighị ezi, ebe ebe dị n'ihu dị mkpirikpi karịa azụ.
Egwurugwu na-echefu echefu na nke na-echefu echefu ga-enyere aka ịmepụta mpempe ntinye mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ngwaahịa a na-etinye na nkedo. Ihe dị mkpa iji mee ya, bụ ezigbo ọnụ ọgụgụ na enweghi ibu arọ. E nwere mgbanwe dị iche iche nke ụdị:
uzo di iche - enwere ike mebie ya, ihe dika elu, ma obu ugwo onu.
dị ka atụmatụ agba, a na-enye mmasị na agba odo ma ọ bụ na-acha ọcha, a na-ahọrọ ụdị ụda olu a maka ihe ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịhọrọ nhọrọ agba;
Ngwaahịa a nwere ike ịbụ monophonic ma ọ bụ nwere ihe ịchọ mma - mmagharị ma ọ bụ eserese.
T-uwe elu na-eme ka a na-eme ya
A na-ewere ọdịdị dị mma dịka uwe elu n'ihu n'ihu dị ogologo. A na-eji ya na-ebipụ ya, nke nwere ike zoo ụfọdụ adịghị ike nke ọnụ ọgụgụ ahụ. Ngwaahịa nwere ike ịnweta nkọwa dị otú ahụ:
na-enwe ma ọ bụ na-enweghị aka uwe, nwere ihe ndị dị egwu na mpaghara ubu;
nwere ike ime na agba ọ bụla;
enwere ike idozi ihe dika ederede, nbipute, ngwa;
N'elu nwere ike itinye ihe ndị dị otú a: floral motifs, mkpụrụedemede akwụkwọ isi mmiri, ihe osise nke ndị dike, eserese 3-D nke ụmụ anụmanụ.
T-shirts na ụdị nke agha
Ọtụtụ fashionistas meriri ejiji ndị agha maka ndị inyom, n'ihi na ụdị àgwà ndị a dị iche iche bụ àgwà:
Ọ bara uru ịṅa ntị na ákwà, ka mma na ọ bụ owu, ebe abụọ emeri viscose;
Banyere ịkpụ, ndị kachasị ewu ewu bụ T-shirts kwesịrị ekwesị, ha nwere ike ịbụ ogologo ma ọ bụ obere aka;
lee akwa akwa na obere obere olu na ọnụnọ ọtụtụ bọtịnụ;
Ihe ụfọdụ na-ejikọta ya na ntinye akpụkpọ anụ, agbụrụ na nkọwa nkọwa;
n'elu nwere ike ịbụ ihe osise metụtara isiokwu ndị agha.
Ụdị t-shirts na eriri
Di oke egwu na nwayo na-ele anya otu uwe elu nke nwere ike ime n'ime uzo di iche iche:
otu ngwaahịa nke eji akwa ákwà;
ihe ndozi ejiji nwere ike ịnwe na ngwugwu, nke nwere ike ịbụ ma obere ma larịị, na multilayered;
lace nwere ike ịchọta mpaghara ma ọ bụ mpaghara decolleté;
Ndozi ga-enye lace n'azụ;
a na-arụ ọrụ kacha mma na-eme ka a na-eji ejiji na-acha ọcha na pastel agba iji mesie ịdị mma nke ihe ndozi ahụ mma.
T-uwe nwanyị na-ebipụta
Ọbụna ụmụ nwanyị ejiji ejiji na-enweghị ike ịgafere ihe ndị inyom mbụ na-ebipụta. E nwere ọtụtụ ihe oyiyi, ị nwere ike ịmata ọdịdị dị otú ahụ na T-shirts:
ihe ịchọ mma na ifuru;
ụdị dị iche iche nke edere ederede na font mbụ;
mbipụta na-egosi onye amara aha ya;
ngwaahịa na ihe osise;
akụkọ nke otu ụlọ ọrụ a maara nke ọma, dịka ọmụmaatụ, Nike, Adidas, Louis Vuitton na ụdị ndị ọzọ;
Ụdị gothic, nke na-adịbeghị anya na-ewu ewu na mma.
Uwe T-emecha maka zuru
Ndị nwere ụdị ndị dị ebube pụkwara ile anya na-adọrọ adọrọ ma mara mma, na-ahọrọ onwe ha ezigbo ihe nlereanya. Maka nke a, ị ga-agbaso ndụmọdụ ndị a:
Achọla ụdị ejiji dị mma;
ezi nhọrọ ga-abụ ogologo oge T-shirts maka ụmụ agbọghọ, nke nwere ike ịbụ ihe nkwekọrịta ma ọ bụ nwee mkpịsị n'akụkụ;
Nhọrọ nwere ike ịbụ ihe atụ nke na-ekpuchi afụ ọnụ;
ekwesiri igosi ike mpaghara mpaghara decollete site n'enyemaka nke mmebi V;
iji chọpụta ebe a na-agbapụ ụkwụ, ị nwere ike ịkwụsị na nsụgharị ahụ na ngwongwo na-agbanwe;
Adịghị ejide onwe gị na ojiji ọdịbendị ọdịnala, i nwere ike ịhọrọ agba ọkụ;
a na-atụ aro ka ị jiri nlezianya na-achọ ụdị nbipụta, oke ihe osise dị iche iche nwere ike ilekwuo centimeters ọzọ.
Ihe oyiyi kachasị mma na uwe T
N'ihi ụdị dịgasị iche iche a na-enye, ị nwere ike ịmepụta ọkpụkpọ ọ bụla nke nwere t-uwe. Anyị nwere ike ịhụ ọkwa ndị dị otú ahụ:
Maka ọdịdị egwuregwu, ị ga-ahọrọ ụdị ihe kwesịrị ekwesị dịka ịkpụ. N'otu oge ahụ, a na-atụ aro ka e mesie ya ike site na iji ederede ma ọ bụ ihe ngosi. A jikọtara ihe dị otú ahụ na uwe egwuregwu ma ọ bụ obere uwe.
Maka foto azụmahịa, a na-achọ ihe nlereanya dị mma n'enweghị ọtụtụ ihe eji edozi ihe, ọ ga-adaba na jaket. Dị ka mgbakwunye na ọfịs ụlọ ọrụ ahụ ga-abụ dịka ihe nchara mara mma ma ọ bụ uwe mwụda.
Ụdị ejiji na-apụta nsị nke ihe ndozi, ọ nwere ike ịbụ ihe mkpuchi, sequins, rhinestones, lace, ihe osise ọ bụla. Ihe dị otú ahụ ga-ele anya na uwe ime akwa na uwe mara mma.
Achịcha abalị ga-ejikọta ngwaahịa nke lace na silk, nke dabara n'okpuru uwe mwụda mara mma ma ọ bụ akwa nchara.
Atụ anya maka oge ịse foto
Kedu ka esi esi maa mma?
Pink na uwe
Echiche maka di na nwunye foto foto
Na ihe ị ga-eyi uwe na-acha akwụkwọ ndụ - nhọrọ nke foto nke ihe oyiyi kachasị mma na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Uwe akwa maka ọrụ na ọfịs
Uwe ejiji Amerịka
Ndị uwe ojii Ukraine
Uwe uwe obodo Yakut
Kedu ihe ị ga-eyi akpụkpọ ụkwụ uhie?
Ụdị ọhụụ ọhụrụ
Achịcha azụ si pike
Bella Hadid na Kendall Jenner na London weere òkè na Pride Parade
Ụlọ balsam - Atụmatụ maka nlekọta maka beginners florists
Downers Montclair - nhọrọ nke foto nke ụdị kacha mma nke oge a
French na-agba na oven
Pickled eyịm maka shish kebab - ihe nchịkọta kacha mma maka nri kachasị mma maka anụ
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Bryansk
Mbadamba nkume maka imeri nsogbu
Selena Gomez na The Week on the most ridiculous date
Otu esi eji akwa a na-ekpuchi uwe - nhọrọ nke foto nke ihe oyiyi
Ihe nkedo eji achọ mma
Ebube Ndị inyom 2015
Salads maka oyi
Oge sara mbara ụmụ nwanyị
Ihe eji eme ihe n'oge a
Ụdị nkịta Jack Russell Terrier
Esi esi esi nri pancakes na mmiri ara ehi?
Kedu ka esi eto ụtaba - gịnị ka ịchọrọ iji nweta ọgaranya?
Agwa ofe - uzommeputa